Uyifaka njani iGoogle Tag Manager kunye neUniversal Analytics | Martech Zone
NgeCawa, Oktobha 30, 2016 NgoMvulo, nge-7 kaDisemba ngo-2020 Douglas Karr
Siye saguqula abathengi baya kuMphathi weeThegi zikaGoogle kutsha nje. Ukuba awukamva ngolawulo lwethegi okwangoku, sibhale inqaku elinzulu, Yintoni uLawulo lweeTag? -Ndiyakukhuthaza ukuba uyifunde.
Ithegi sisiqwengana sekhowudi esithumela ulwazi kumntu wesithathu, njengoGoogle. Ukuba awusebenzisi isisombululo solawulo lwethegi njengoMphathi weTag, kuya kufuneka ukongeze ezi ziqwengana zekhowudi ngqo kwiifayile ezikwiwebhusayithi yakho okanye usetyenziso lweselfowuni. Isishwankathelo soMlawuli weThegi kaGoogle
Ngaphandle kwezibonelelo zolawulo lwethegi, uMphathi weTek kuGoogle unenkxaso yemveli yezicelo ezinje ngeGoogle Analytics nokuba uya kufuna ukuthatha ithuba. Kuba iarhente yethu isebenza kancinci kwizicwangciso zomxholo kubaxhasi bethu, siqwalasela i-GTM kubo bonke abathengi bethu. Ngomphathi weTag kaGoogle kunye noHlaziyo lweNdalo iphela, sinokumisela ulwazi olongezelelweyo ngeGoogle Analytics 'Yamaqela eMxholo ngaphandle kokuhlela ikhowudi engundoqo kwiindawo zabaxhasi bethu. Ukumisela aba babini ukuba basebenze kunye ayisiyokuphela kwentliziyo, nangona kunjalo, ndifuna ukukubhalela.
Ndiza kubhala inqaku elizayo malunga nokuqwalaselwa Ukwahlula umxholo ngoMphathi weThegi kaGoogle, kodwa kwinqaku lanamhlanje, ndineenjongo ezi-3:
Uyifaka njani iGoogle Tag Manager kwiSayithi yakho (kunye neenkcukacha ze-WordPress ezongeziweyo).
Ungamongeza njani umsebenzisi kwiArhente yakho ukuze bakwazi ukulawula uMlawuli weThegi kaGoogle.
Uyicwangcisa kanjani iGoogle Analytics kuGoogle Tag Manager.
Eli nqaku alibhalelwanga wena kuphela, liyinyathelo nenyathelo kubaxumi bethu. Iya kusivumela ukuba sibaphathe i-GTM kubo kwaye siqhubeke sobabini nokwandisa ukuba izikripthi zangaphandle zilayishwa njani kunye nokuphucula ingxelo yabo kaGoogle yoHlahlelo.
Uyifaka njani iGoogle Tag Manager
Usebenzisa ukungena kwakho kuGoogle, uza kuyibona loo nto Umphathi weTekisi yeGoogle ngoku lukhetho kwimenyu ephambili, cofa nje sayina:
Ukuba awuzange usete iakhawunti yeGoogle Tag Manager ngaphambili, kukho iwizard entle yokuhamba useta iakhawunti yakho yokuqala kunye nekhonteyina. Ukuba awuyiqondi i-verbiage endiyisebenzisayo, qiniseka ukubukela ividiyo kule post ihamba kuwe!
Okokuqala, biza igama leakhawunti yakho. Ngokwesiqhelo, uya kuthi igama emva kwenkampani okanye ukwahlulahlula kwakho ukuze ufumane kwaye ulawule indawo nganye kunye neeapps onokuthi ube nazo uMphathi weTek kuGoogle ngokulula.
Ngoku ukuba iakhawunti yakho iseti, kuya kufuneka usete eyakho yokuqala isitya.
Xa ucofa ukudalaUya kucelwa ukuba uvumelane neMigaqo yeNkonzo. Nje ukuba uvume, uya kunikwa izikripthi ezimbini oza kuzifaka kwindawo yakho:
Nika ingqalelo apho ufaka ezi thegi zesikripthi, kubaluleke kakhulu ekuziphatheni kwazo naziphi na iithegi oza kuzilawula ngaphakathi kuMphathi weTag kaGoogle kwixa elizayo!
Sebenzisa iWindowsPress? Ndingacebisa kakhulu ukuba I-Duracelltomi Iplagi yomphathi weGoogle weWordPress. Xa silungiselela amaQela eMxholo kuGoogle Analytics, le iplagin yenza ukuba izinto zikhethwe ngaphakathi eziza kukugcinela uninzi lwentlungu!
Ukuba uqwalasela i-GTM usebenzisa iplagi yomntu wesithathu okanye ukudityaniswa, uhlala ubuzwa eyakho Isazisi sesikhongozeli. Ndihambile ndaza ndayijikeleza loo skrini ingentla. Sukuba nexhala lokuba uyibhale phantsi okanye uyilibale, i-GTM yenza ukuba ifumaneke kwaye ilula kwiakhawunti yakho ye-GTM.
Ngaba izikripthi zakho okanye iplagi ilayishiwe? Kuhle! Umphathi weTag kaGoogle ufakwe kwindawo yakho!
UliNika njani iArhente yakho yokuFikelela kuMlawuli weeThegi zikaGoogle
Ukuba le miyalelo ingentla ibinzima kakhulu, ungatsiba ngqo ekunikezeleni ukufikelela kwiarhente yakho. Vala nje iwizard kwaye ucofe ulawulo kwimenyu yesibini kwiphepha:
Uya kufuna ukucofa Ulawulo loMsebenzisi kwaye ungeze iarhente yakho:
[box type = "tlhokomiso" align = "aligncenter" class = "" width = "80%"] Uya kuqaphela ukuba ndikunika lonke ukufikelela kulo msebenzisi. Unokufuna ukuphatha ukufikelela kwiarhente yakho ngokwahlukileyo. Ngokwesiqhelo, uya kongeza iarhente yakho njengoMsebenzisi kwaye emva koko ubanike amandla okwenza kodwa bangapapashi. Ungafuna ukugcina ulawulo lotshintsho lweethegi zokupapasha. [/ Ibhokisi]
Ngoku iarhente yakho inokufikelela kwindawo yakho ngaphakathi kweakhawunti yeGoogle Tag Manager. Le yeyona ndlela ilunge ngakumbi emva koko ubanike iziqinisekiso zakho zomsebenzisi!
Uyicwangcisa kanjani iGoogle Analytics kuGoogle Tag Manager
Nangona i-GTM ifakwe ngokufanelekileyo kwindawo yakho okwangoku, ayenzi nto de upapashe ithegi yakho yokuqala. Siza kwenza laa tag yokuqala Uhlalutyo lweNdalo iphela. nqakraza Yongeza iTag entsha Kwindawo yokusebenzela:
Cofa kwicandelo lethegi kwaye uya kuyalelwa ukhetho lweethegi, uya kufuna ukukhetha Uhlalutyo lweNdalo iphela:
Uya kudinga ukufumana ikhowudi yakho ye-UA-XXXXX-X kwiskripthi sakho sikaGoogle sokuHlola esele ikwisiza sakho kwaye usifake kwicandelo elichanekileyo. Sukucofa ukugcina okwangoku! Kuya kufuneka sixelele i-GTM xa ufuna ukuyifaka umlilo loo tag!
Kwaye, ewe, sifuna ithegi yomlilo ngalo lonke ixesha umntu ejonga iphepha kwindawo yakho:
Ngoku ungajonga useto lwethegi yakho:
Cofa ugcine kwaye uza kubona isishwankathelo sotshintsho olwenzileyo. Gcina ukhumbula ukuba i-tag ayikapapashwa kwindawo yakho- yeyona nto iphambili kwi-GTM. Unokwenza iitoni zotshintsho kwaye uqinisekise lonke useto ngaphambi kokuthatha isigqibo sokupapasha utshintsho kwindawo yakho:
Ngoku ukuba ithegi yethu iqulunqwe ngokufanelekileyo, sinokuyipapasha kwindawo yethu! Cofa uPapasha kwaye uya kucelwa ukuba ulubhale phantsi utshintsho kunye nento oyenzileyo. Oku kuluncedo olukhulu ukuba unabalawuli abaninzi kunye namaqabane earhente asebenza kwindawo yakho.
[box type = "" warning "align =" aligncenter "class =" "width =" 80% "] Phambi kokuba upapashe iithegi zakho kwiwebhusayithi yakho, qiniseka ukuba susa naziphi na izikripthi zangaphambili zikaGoogle ngaphakathi kwendawo yakho! Ukuba akwenzi njalo, uza kubona ulwakhiwo kunye nemicimbi ngeyakho kubahlalutyi [ingxelo] ibhokisi.
Boom! Ucofe ukupapasha kwaye uguqulelo lugcinwa ngeenkcukacha zokuhlelwa kwethegi. I-Universal Analytics ngoku isebenza kwindawo yakho.
Siyavuyisana, uMphathi weTek kuGoogle uhlala kwindawo yakho ene-Universal Analytics emiselweyo kwaye yapapashwa njengethegi yakho yokuqala!
tags: yongeza ukufikelela komsebenzisii-google analyticsIthegi kaGoogleUmphathi wethegi kaGoogleUmphathi wethegi kaGoogle wongeza umsebenzisiIsikhongozeli somphathi weGoogleUmphathi wethegi kaGoogleUhlalutyo jikelele kuGooglegtmisikhongozeli se-gtmkwenziwa kanjanifaka umphathi wethegi kaGoogleukujonga iphephaUlawulo lwethegiUmphathi wethegikubangela ukujonga iphephaUhlalutyo jikelele
Sebenzisa i-GarageBand yokuQhela ukuLungisa ukuNgena kweeNgxelo zakho zeaudio
Epreli 25, 2017 ngo-2: 34 PM
Uyifart yokwenyani – NDIYATHETHA – smart fella 🙂 Eli nqaku ligqibelele – kanye eyona nto bendiyidinga ukuphumeza i-GTM. Yixabise imifanekiso yesikrini
Epreli 25, 2017 ngo-2: 38 PM
#utata joke 🙂